साना गाडी चलाउन नपाएपछि टेम्पो चालक आक्रोशित - नेपालबहस
साना गाडी चलाउन नपाएपछि टेम्पो चालक आक्रोशित
२६ भदौ, काठमाडौं । निषेधाज्ञा खोलेपनि सरकारले साना गाडी चलाउन नदिएपछि टेम्पो व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । उपत्यकामा दैनिक टेम्पो चलाउने झण्डै दुई हजार चालक सरकारप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।
दुई दिनअघि सरकारले यातायात व्यापार व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेपनि १६ सिटभन्दा साना गाडी चलाउन रोक लगाएको छ । जसकारण सानो माइक्रो र टेम्पो चालकलाई ठूलो समस्या परेको छ । महिनौ टेम्पो चलाउन नपाएर समस्या व्यहोरिरहेका चालकले निषेधाज्ञा खुल्दा पनि गाडी चलाउन नपाएपछि आक्रोश पोखेका हुन् ।
उनीहरुले टेम्पो चलाउन रोक लगाउनुको कारणको जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरेका छन् । टेम्पोमा जम्मा १० जना अट्नेमा पछिल्लो समय उनीहरुले ६ जना मात्रै बोक्दै आएका थिए । तर पनि सरकारले टेम्पो चलाउन रोक लगाएपछि चालक आक्रोशित भएका हुन् ।
जोर बिजोर नमान्ने ९ सय गाडी नियन्त्रणमा ! १५ घण्टा पहिले
उपत्यकामा जोर बिजोर चेकिङले बिहानैदेखि जाम ! १६ घण्टा पहिले
असोज २० देखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी, व्यवसायीको असन्तुष्टि १ दिन पहिले